Isipinatshi, imandarin kunye nesaladi yomkhiwane enobusi vinaigrette | Ukupheka kweKhitshi
UMaria vazquez | 13/03/2021 10:00 | Isaladi
Kukho iintsuku apho ungakhethi into oyityayo; I-pantry iyenzela wena. Esi sipinatshi, itangerine kunye nesaladi yamakhiwane Nge-vinaigrette yobusi yenziwe ngento encinci kunye nenye encinci. Ukuba ayisiyo iresiphi ecingisisiweyo, nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba ayinomdla. Ngapha koko, siza kuyiphinda!
Ekhaya silungiselela imenyu yeveki yonke NgoMgqibelo kwaye senza ukuthengwa okungqinelanayo. Kwaye nangona ixesha lihambile sifundile ukuhlengahlengisa ubungakanani, siyazi ukuba kunzima kakhulu ukungasindisi nantoni na, ke sinikezela isidlo ukugqiba intsalela, ziphekiwe kwaye akunjalo.
Kwezi izinto ezishiyekileyo iisaladi zihlala zivela koku kunye nolunye ulungiselelo, izitya zepasta okanye izitya zerayisi, amaxesha amaninzi, ezisishiya simangalisiwe. Kungenxa yokuba ukuphucula kusinyanzela ukuba sidibanise izinto ebesingazukuzidibanisa ngenye indlela. Yiba nesibindi sokuziqhelanisa! Uya kufezekisa izitya ezilula kwaye ezisempilweni njengale ndiyicebisayo namhlanje.
Ilula, ilula kwaye isempilweni, esi sisipinatshi, imandarin kunye nesaladi yomkhiwane enobusi vinaigrette esabelana nawe namhlanje.
200 g. ispinatshi
4 amakhiwane omileyo
Iipuniwe ezi-2 zeviniga zebhalsam
Sicoce isipinatshi, sisusa imisila kwaye siyinqumle, ukuba njengam ziyisipinatshi esikhulu.
Sizifaka kwisitya sesaladi kwaye yongeza amacandelo e-mandarin ngokufanayo.
Ke yongeza amakhiwane asikiwe kwizilayi.
Kwisitya esahlukileyo, silungiselela i-vinaigrette ukuxuba ezinye izithako kunye nokubabetha ngemfoloko.
Sinxiba isaladi Isipinatshi nge vinaigrette kwaye ukhonze.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Isaladi » Isipinatshi, i-mandarin kunye nesaladi yomkhiwane ene-vinaigrette yobusi
I-cookies kunye ne-chocolate chip cookies